Nkume Na-enweghị Anya, Nkume Laser - Dien
Methodszọ na-eto eto gụnyere kwụ na vetikal, ihe ndị a (ZnGeP2, AgGaS2, AgGaSe2, GaSe, KTA, KTP, BIBO, LBO, BBO) nwere ogo na nghazi enyere. Offọdụ n'ime ha, nwere njirimara nke ọnụọgụ na-enweghị atụ na akụkụ pụrụ iche anyị nyere ka a na-ejikarị eme ihe na SHG, THG na Mid-infrared OPO, sistemụ OPA, wdg. Enwere ike ịnye ngwaahịa ma ọ bụ na-enweghị Anodized Aluminom.
Cr4 +: YAG kristal
Banyere Dien Tech
Dịka ụlọ ọrụ teknụzụ na-eto eto na-eto eto, DIEN TECH bụ ọkachamara na nyocha, imewe, imepụta na ire nke usoro kristal na-enweghị atụ, kristal laser, kristal na-emepụta ihe na-emepụta ihe. Ezigbo mma na asọmpi ọcha na-wildly etinyere na gbara akwụkwọ nke ndị ọkà mmụta sayensị, mma na ulo oru ahịa. Anyị ukwuu raara onwe ya nye ahịa na ahụmahụ injinia ìgwè na-agbasi mbọ ike na-arụ ọrụ na ndị ahịa si mma na ulo oru gbara akwụkwọ nakwa dị ka nnyocha obodo n'ụwa nile maka aka ahaziri ngwa.
Nnukwu ZnGeP2 (Koodu: YS-ZGP) otu kristal nwere obere ọnụọgụ mmịpụta nke DIEN TECH mepụtara
Broadband, nke na-esote okirikiri infrared na-adabere na ọgbọ dị iche iche nke intra-pulse ugboro ole na ole na kristal BGSe
Generation of octave-spanning mid-infrared using a BGSe nonlinear crystal Dr.JINWEI ZHANG na ndị otu ya na-eji usoro Cr: ZnS laser na-ebugharị mkpụrụ osisi 28-fs na ntụgharị nke 2.4 µm dị ka isi iyi mgbapụta, nke na-eme ka intra ahụ -pulse ọdịiche fr ...
Achọghị Njirimara Pụrụ Iche nke AgGaSe2 Crystals kwesịrị ka amata!
Njirimara Pụrụ Iche nke AgGaSe2 Kristal AgGaSe2 / AgGaS2 kristal na-enwe mmetụta nke radieshon Ultraviolet, ọbụlagodi UV ọkụ na nyocha gị ga-enwe mmetụta na njirimara nke ihe ndị a, mmetụta nwere ike igosi dị ka nnyefe mbelata ma ọ bụ ogo elu ...